Marcelo oo jebiyay rikoor wax ka badan hal qarni u yaallay Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 17 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xaqiijisay inay fasaxday kabtankeeda Sergio Ramos sidaas darteedna waxaa xilka kabtanka kooxda la wareegay Marcelo.
Difaaca reer Brazil ayaa noqday kabtankii ugu horreeyay ajannabi ah ee hoggaamiya xiddigaha Los Blancos tan iyo 1904 xilligaas oo uu kabtanka Madrid ahaa Federico Revuelto oo uu dhashay Guatemala.
Xilka kabtannimada Real Madrid ayuu Sergio Ramos ka dhaxlay Iker Casillas, waxaa haatanna Marcelo uu ka dhaxlay Ramos, sida caadiga u ahna Madrid kabtannimadeeda ayaa la isugu dhiibaa sida loogu soo kala horreeyay kusoo biirista kooxda.
Sidaas darteed, Marcelo ayaa haatan Los Blancos ku sugan 15 sano waana midka ugu xilliga dheer xiddigaha kooxda, waxaana ku xiga Karim Benzema oo inta badan la saadaalinayo inuu marada kabtanka xiran doono maadaama uu koobnaan karo waqtiga difaaca garabka ka bidix ka ciyaara uu garoonka ku jiri karo.
Muxuu Sergio Ramos u qabtay Real Madrid 16-kii sano ee uu ka sugnaa?...(Goolasha, caawinta iyo koobabkiisa)
"Waxaan rabaa inaan la shaqeeyo Koeman, war cusubna waad heli doontaan sida ugu dhaqsaha badan" - Memphis Depay